IiCanonicals ezinqamlezileyo aziyiyo eyamazwe aphesheya | Martech Zone
UkuSebenziswa kweeNjini zoKhangelo kwiiwebhusayithi zamanye amazwe bekusoloko kunguye isifundo esintsonkothileyo. Uya kufumana iingcebiso ezininzi kwi-Intanethi kodwa akufuneki ukuba uzenze zonke iingcebiso ozivayo. Thatha ixesha lokuqinisekisa ulwazi olufumana kwi-intanethi. Ngelixa ingcali inokuba ibhalile, akusoloko kuthetha ukuba zichanekile.
Umzekelo, Hubspot ukhuphe i-ebook entsha I-50 SEO kunye neeNgcebiso zeWebhusayithi zeMarketer yamanye amazwe. Singabalandeli be Hubspot kwaye iarhente yethu igunyazisiwe Iarhente yeHubspot. Nangona kunjalo, le ncwadi yakutshanje inike incam engalunganga enokufumana abantu be-SEO engxakini xa besebenzisa iisayithi zabo zamanye amazwe. Sibabuze malunga nayo kwezentlalo kwaye sabonelela ngeereferensi zikaGoogle- kodwa asifumananga mpendulo ingako izakulungiswa. Ngenxa yoko, sibhala le posi silumkisa abafundi bethu.
Ingcebiso ye-SEO yamanye amazwe
Xa usebenzisa idomeyini engaphezulu kwesinye (TLD), Hubspot kucetyiswa ukusebenzisa Umnqamlezo wethegi ye-canonical tag ukukhomba indawo nganye yamanye amazwe kwindawo yakho engundoqo. Le ayisiyonto ilungileyo kwaye iya kuyenzakalisa iinzame zakho ze-SEO. Inkqubo ye- i-rel = "i-canonical" ithegi uqhelile Ukuphelisa imixholo ephindiweyo yomxholo kwiiwebhusayithi. Isetyenziselwa ukuxelela uGoogle ngohlobo olukhethiweyo lweseti yamaphepha enomxholo ofanayo ofuna ukuba uGoogle awukhombise kwaye awubonise kwi-SERP yawo. Iingcali ze-SEO zicebisa ukuba nanini na ukulungiswa kunokwenzeka kumxholo ophindwe kabini ungazisebenzisi iithegi zecanon.
Nantsi incam ethi Hubspot zibonelelwe:
IiCanonicals ezinqamlezileyo aziSosisombululo
Masicinge ukuba ndine-3 gTLDs kwiwebhusayithi yam yamanye amazwe- mysite.com, mysite.co.uk, yaye yam.de. i-mysite.com kunye ne-mysite.co.uk zinomxholo ofanayo; mysite.de inomxholo ofanayo kodwa kulwimi lwesiJamani.
Masenze oko kuthethwe yincwadi. Indawo yam ephambili mysite.com. Ke ndiza kubeka ikhonkco le-canonical njenge-mysite.com kwi .co.uk nakwimimandla ye .de. Xa uGooglebot efikelela kwi-domain yam .co.uk ilandela i-canonical tag tag kunye nezalathiso zam .com domain.
Ukuba ndiyakwenza oku, UGoogle akasokuze alungelelanise domains zam .co.uk kunye .de kwaye la maphepha aya kuthi ungaze uvele kukhangelo lukaGoogle lwengingqi! Ndiza kuphulukana nalo lonke igunya endilakhele imimandla yam yengingqi kwindawo ye-.com!
Ukuphunyezwa kwe-hreflang sisisombululo esifanelekileyo
Ukuba ufuna ukugcina iiwebhsayithi zengingqi kwaye ukuba ungakha igunya kwikhowudi yelizwe ngalinye i-TLDs, Sukusebenzisa ii-canonical tag. UGoogle ngenene Uphendule lo mbuzo ngoncedo lweforum yeWebmaster Central (Enkosi ku UAnju Mohan). UGoogle uthe "ungayisebenzisi i-canonical tag" ukuba ufuna ukuba iiwebhusayithi zakho ezikwimimandla emininzi zifakwe kuGoogle. UGoogle uthe sebenzisa rel = "enye" ​​hreflang = "x" tag endaweni yoko.
The rel = "enye" ​​hreflang = "x" yaziswa nguGoogle ngokukodwa kwiiwebhusayithi zamanye amazwe - uninzi lweelwimi kunye neelwimi ezininzi. Inceda uGoogle ukubonisa uguqulelo oluchanekileyo lwendawo yakho yengingqi kubaphendli. Kule meko ingentla, ndiza kuphumeza i-hreflang tag njenge:
Yongeza oku kuseta kwintloko nganye yamaphepha engingqi kwaye ugcine engqondweni ukuba hreflang ithegi ichaza iphepha elithile. Ngoku ukuba umntu ukhangela inkonzo yam kuGoogle UK, iyakubonisa uguqulelo olululo lwewebhusayithi yam ethi mysite.co.uk.
tags: umnqamlezoIimpawu ze-canonical ezinqamlezileyohreflangseo ngamazwekumazwe ngamazwe
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2012 ngo-12: 52 AM
Uchanekileyo nge-100%. Ndisandula ukuwenza lo mbandela nenkampani yamanye amazwe. Ukubamba kakuhle!
UNikhil Raj. R
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2012 ngo-5: 10 AM
Enkosi Ryan ..
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2012 ngo-6: 13 AM
Eyona elungile! Enkosi ngokwabelana… kufuneka singene koku kungekudala kunye neewebhusayithi zethu…
Ngomhla wama-17 ku-Disemba 2012 ngo-2: 29 AM
Indlela yokuhamba nikki !! i-rel = "enye" ​​hreflang = "x" yayilwazi olutsha kum ..
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2012 ngo-5: 20 AM
Kutheni ukuba "uGoogle akacingi ukuba iinguqulelo zolwimi lwasemzini ziyimixholo ephindiweyo" kufuneka sisebenzise i-hreflang tag njenge
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2012 ngo-6: 14 AM
Ukuba unenguqulelo yolwimi lwangaphandle lwesiza esikwisizinda esisezantsi okanye kwi-gTLD eyahlukileyo akukho sidingo sokusebenzisa le thegi kuba awunawo umxholo ophindiweyo. Le thegi iluncedo kakhulu xa unemixholo efanayo kulwimi olunye ngokwahluka kwengingqi umzekelo unesiqulatho solwimi lwesiNgesi esijolise kubafundi base-USA nase-UK kananjalo xa ingxelo yolwimi lwangaphandle ikwifolda encinci. Ungayisebenzisa le thegi ukuxelela uGoogle ukuba abantu abakhangela kuGoogle UK inguqulelo oyithandayo yokubonisa kwiziphumo zokukhangela yinguqulelo ye-UK yendawo yakho.
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2012 ngo-8: 34 AM
Njengoko bendiyiqonda. Enkosi